Uma uchitha isikhathi esiningi kufanele zisebenze ngombhalo kwi-PC, khona-ke kungenzeka Wayevamile ukuzibuza ukuthi ukwenza ifonti enkulu kukhompyutha yakho. Uma unesifiso ukuxazulula le nkinga ngokushesha futhi ngendlela efanele, lapho-ke sincoma ukuthi ufunda lesi sihloko. Futhi labo abathanda ukufunda futhi ngokuvamile yamehlo, qiniseka ukusebenzisa le ndlela.
Ngakho, uma umbuzo Kuvezwe kuwe mayelana nendlela ukwenza ifonti emikhulu kukhompyutha, uyazi ukuthi asemaningi manje ezihlukahlukene ongakhetha ngazo ungakwazi ukuxazulula le nkinga. Futhi lesi sihloko, uzobe ngokwanele idingidwa.
Asiqale sithi fahla fahla ifonti ukwanda-Windows e-operating system Windows. Into yokuqala udinga ukuya ideskithophu. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi nje Roll iwindi noma uvale kubo. Ngokulandelayo, chofoza ngakwesokudla endaweni ingenalutho futhi ukuya "Properties" sigaba. Uma ziyiqiniso, iwindi kufanele avele phambi kwakho, lapho ungakwazi ukuthola kalula "Ukubukeka" sigaba.
Kukhona ezintathu ongakhetha sokushintsha, esikhundleni, ungakhetha ifonti esikhulu kakhulu, ezinkulu kanye njalo. Khona-ke zonke kuzodingeka athembele kuphela izintandokazi zakho, kodwa ngaphambi kokuthi kusebenze isixazululo encomekayo, ungabona-ke ewindini.
Uma usuthole ifonti, kufanele chofoza inkinobho "Faka", bese zithatha isikhathi esithile ukuze ulinde, nakho konke zizoshintsha. Uma une isifiso ukushintsha imingcele ewindini, bese enze le nqubo futhi ukhethe usayizi oyifunayo.
Manje, cishe ngeke kuphakama umbuzo ngokuqondene nendlela ukwenza ifonti enkulu kukhompyutha nge indlela yokusebenza ye-Windows. Ngalolu yesikhulumi, kukhona kungenzeka for umsebenzisi ngamunye ukwenza izinguquko usayizi wombhalo kuphela ezindaweni ezithile. Ngokwesibonelo, lapho awudingi ukushintsha ngokuphelele izilungiselelo, kodwa ezinye izinto ezidinga ukulungiswa.
Ukuze ufunde ukuthi ungenza kanjani font enkulu kukhompyutha yakho, kufanele ufunde le ncwadi, okulotshiwe ngezansi. Futhi, siye iwindi Properties bese uya "Ukubukeka" ithebhu. Kube udinga ukuthola inkinobho ekhethekile ethi "Okuthuthukisiwe". Phambi kwakho kufanele ubone izilungiselelo ezintsha, lapho ungakwazi ukusetha befonti izinto. Lezi nemingcele ukuvumela umsebenzisi ngamunye ukuze adalule izinkomba ngamanye amafonti kukhompyutha yakho.
Eqinisweni, uma umbuzo imayelana nendlela ukwenza ifonti enkulu, kwakungenakwenzeka ukuba unqume Kulokhu, ungakwazi ukucela ukusizwa esikhungweni sesevisi lapho ochwepheshe uyosingatha le nqubo. Uzokwaziswa kwesokunxele zokuxhumana kuphela ezithokozisa nabantu abathandayo njengomkhaya PC. Nokho, lesi sihloko wakhuluma mayelana nendlela ukwenza ifonti enkulu kukhompyutha yakho, kanye nabasebenzisi abaningi ngeke baye bakwazi ukubona ukuthi konke kwenziwa ngokushesha okukhulu, futhi okubaluleke kakhulu, kulula. Lokhu akufanele kusenze noma ibuphi ubunzima.
Immobilizers - kuyini? I immobiliser iyunithi. Uphi immobiliser